च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा आज रियल मड्रिड र लिभरपुल भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? || सुनौलो नेपाल
च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा आज रियल मड्रिड र लिभरपुल भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
धेरैपटक उपाधि जित्ने टिमको सूचीमा रियल शीर्ष स्थानमा छ भने लिभरपुल पाँचौं स्थानमा छ
काठमाडौं। च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा आज रियल मड्रिड र लिभरपुल भिड्दैछन् । खेल नेपाली समयअनुसार राती साढे १२ बजे सुरु हुनेछ । युक्रेनको राजधानी किभमा रहेको नेशनल स्पोर्टस कम्प्लेक्सको ओलिम्पिस्की स्टेडियममा हुँदैछ । यो स्टेडियमको दर्शक क्षमता क्षमता ७० हजार छ ।
मड्रिड र लिभरपुल ३७ वर्षपछि फाइनलमा भिड्दैछन् । यसअघि १९८१ मा यी दुई टिम फाइनलमा भिडेका थिए । यो फाइनल खेल लिभरपुलले १–० ले जितेको थियो । आज हुने फाइनलमा कुन टिमले जित्ला भन्ने अड्कल काट्न कठिन छ । यद्यपि च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड सबैभन्दा सफल टिम हो । उसले अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगका १२ उपाधि जितिसकेको छ । लिभरपुलले भने अहिलेसम्म ५ उपाधि मात्र जितेको छ ।
धेरैपटक उपाधि जित्ने टिमको सूचीमा रियल शीर्ष स्थानमा छ भने लिभरपुल पाँचौं स्थानमा छ । रियलले अहिलेसम्म १५ फाइनल खेलेकोमा ३ खेल हारेको छ । लिभरपुलले अहिलेसम्म ७ फाइनल खेलेकोमा २ खेल हारेको छ । पछिल्ला २ वर्ष भने लिगमा रियल हावी छ । उसले २०१६ र २०१७ मा लगातार २ उपाधि जितेको छ । अहिले पनि उपाधि जितेमा रियलले जीतको ह्याट्रिक गर्नेछ । रियलले १९५६ देखि १९६० सम्म लगातार ५ वर्ष उपाधि जितेपछि अहिलेसम्म उपाधिको ह्याट्रिक गर्न सकेको छैन । आजको खेल जितेमा ५८ वर्षपछि रियलको जीतमा ह्याट्रिक हुनेछ ।
लिभरपुलले भने पछिल्लो पटक २००५ मा उपाधि जितेको थियो । त्यसपछि २००७ मा फाइनल पुगेको लिभरपुल एसी मिलानसँग २–१ ले पराजित भएको थियो । रियल भने १९८१ मा लिभरपुलसँग फाइनलमा पराजित भएयता कुनै पनि फाइनल खेलमा पराजित भएको छैन । लिभरपुलसँग १९८१ मा पराजित भएयता रियल १९९८, २०००, २००२, २०१४, २०१६ र २०१७ मा गरी ६ पटक फाइनल पुगेको छ र यी सबै ६ खेल रियलले जितेको छ ।
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा रियल मड्रिडको सफलता दर ८० प्रतिशत छ र लिभरपुलको सफलता प्रतिशत ७१.४२ प्रतिशत छ । आजको खेलमा मुख्यगरी रियलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लिभरपुरका मोहम्मद सलामाथि दर्शकको नजर रहनेछ । रोनाल्डोले यो सिजनमा १५ गोल गरेका छन् र सलाले १० गोल गरेका छन् । इजिप्टका फुटबलर सलाले यस सिजनमा प्रिमियर लिग फुटबलर अफ द इयरको उपाधि पनि जितेका छन् । रोनाल्डोले यो उपाधि २००७–०८ को सिजनमा जितेका थिए ।
यो खेलमा पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डो सबैभन्दा धेरै पटक च्याम्पियन्स लिग खेल्ने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पुग्नेछन् । रोनाल्डोले आजको खेलमा मैदानमा उत्रिँदा १५७ औं च्याम्पियन्स लिग खेलिरहेका हुनेछन् । अहिले दोस्रो स्थानमा रहेका स्पेनका जावी हर्नान्डेजले पनि १५७ खेल खेलेका छन् । सबैभन्दा धेरै च्याम्पियन्स लिग खेल्ने खेलाडी भने स्पेनिस गोलकिपर इकर क्यालिसास हुन् । उनी १७१ च्याम्पियन्स लिगका खेल खेलेका छन् ।